Kutheni iJamaica? Impendulo kwi-US "Sukuhamba" Iingcebiso
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Kutheni iJamaica? Impendulo kwi-US "Sukuhamba" Ingcebiso
Airlines • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • abantu • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Kutheni iJamaica? Impendulo kwi-US "Sukuhamba" Ingcebiso
Uqoqosho lwaseJamaica luxhomekeke kakhulu kushishino lokhenketho nokhenketho. I-US ekhupha iNqanaba lesi-4 izilumkiso zokuhamba lolona hlobo lukhulu lokuphoxeka kunye nesoyikiso kwisizwe esisesiqithini. Uninzi lwazo luyasebenza kwaye luxhomekeke kwimpilo yezokhenketho kunye nomzi mveliso wokhenketho, kwaye amaMelika uninzi lwabo babakhenkethi.
Isebe laseMelika laseMelika ngokusebenzisana neCDC likhuphe iNqanaba 4 lokucebisa ngeJamaica.
Inqanaba lesi-4 lokucebisa lelona cebo liphezulu kwikhonkco kwaye kuthetha ukuba amaMelika "angahambi."
Umphathiswa wezokhenketho waseJamaica uphendula kwesi silumkiso kwingxelo ekhutshelwe eTurboNews namhlanje.
UMphathiswa wezoKhenketho eJamaica, Hon. U-Edmund Bartlett, ukhuphe le ngxelo ngokubhekisele e-United States ekhupha "Ingahambi" ngeNgcebiso ngokuchasene neJamaica:
IJamaica kutsha nje yamkele isivakashi sayo esisigidi ukusukela ekuvuleleni kwakhona ukuhamba ngoJuni 2020, kwaye iindwendwe zinokuziva zithembile ngokwazi ukuba Iipaseji eziQinisekayo zaseJamaica- ezigubungela ngaphezulu kweepesenti ezingama-85 zemveliso yezokhenketho kwesi siqithi kwaye zibandakanya ngaphantsi kwepesenti yabemi bethu kurekhodwe inqanaba losuleleko lwe-COVID-19 phantsi kwepesenti enye kunyaka ophelileyo.
Oku kuphunyezwe ngeenkqubo ezomeleleyo ezenziwe ngokudibeneyo nabasemagunyeni kumacandelo ezempilo kunye nezokhenketho. Ezi protocols zaziphakathi kwabokuqala ukufumana ukwamkelwa okuKhuselekileyo kweBhunga lezoKhenketho kwiHlabathi liphela kunye noKhenketho okusivumele ukuba siphinde sivule ngokukhuselekileyo ngoJuni ka-2020.
Impilo kunye nokukhuseleka kwawo wonke umntu waseJamaican kunye nalo lonke undwendwe kweli lizwe kuhlala kungumba ophambili, kwaye silindele ukuba inqanaba lesi-4 elichongwe liZiko laseMelika lokuLawula nokuThintela izifo (CDC) liza kuba lifutshane ngexesha.
Ngelixa iJamaica ililinye lamazwe angama-77 kwihlabathi liphela, kubandakanya uninzi lwabazalwana bethu baseCaribbean, ukufumana inqanaba lesi-4, sihlala siqinisekile ukuba iiPaseji zethu eziQinisekayo kunye neeprotokholi ziya kuqhubeka nokusisa kwindlela elungileyo.
I-United States ikhuphe inqanaba 4 lezilumkiso zohambo kumazwe aliqela axhomekeke kubakhenkethi.
Xa ukhupha i-Do not Travel Advisory, urhulumente wase-US namhlanje ushiye inxenye yokuba kukhuseleke kangakanani ukutyelela iJamaica xa kuthelekiswa neFlorida okanye iHawaii- xa kufikwa kwisoyikiso sosulelo lwe-COVID.
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica, Hon. U-Edmund Bartlett, khange abe yinkokheli yelizwe lakhe kuphela kodwa nendalo yakhe Ukomelela kwezoKhenketho kwiHlabathi liphela kunye neZiko leNkathazo, IJamaica ibisoloko ikhokela kwihlabathi xa kufikwa kukhenketho olukhuselekileyo kunye nengxaki.
The Amaziko oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo (CDC) ukhuphe i Inqanaba 4 lezeMpilo yokuHamba Isaziso ngenxa ye-COVID-19, ebonisa inqanaba eliphezulu kakhulu le-COVID-19 elizweni. Umngcipheko wokufumana ikhontrakthi i-COVID-19 kunye nokukhula kweempawu ezinzima kunokuba sezantsi ukuba ugonywe ngokupheleleyo Isitofu sokugonya esigunyazisiweyo se-FDA. Ngaphambi kokucwangcisa naluphi na uhambo lwamanye amazwe, nceda uphonononge izindululo ezithile zeCDC ugonywe kwaye engagcinwanga abahambi. Ndwendwela iOfisi yoZakuzo Iphepha le-COVID-19 ngolwazi oluthe kratya nge-COVID-19 eJamaica.
Iindawo ezidweliswe apha ngezantsi eKingston ngenxa ulwaphulo-mthetho.
Iindawo ezidweliswe apha ngezantsi eMontego Bay ngenxa ulwaphulo-mthetho.
Idolophu yaseSpain ngenxa ulwaphulo-mthetho.
Isishwankathelo selizwe: Ulwaphulo-mthetho olunobundlobongela, njengokuhlasela emakhaya, ukuphanga kuxhotyiwe, ukuhlaselwa ngokwesondo kunye nokubulawa kwabantu kuqhelekile. Ukuhlaselwa ngokwesondo kwenzeka rhoqo, kubandakanya zonke iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezibandakanya wonke umntu. Amapolisa endawo awanazo izixhobo zokuphendula ngokufanelekileyo kwiziganeko zolwaphulo-mthetho ezimandundu. Iinkonzo zikaxakeka ziyahluka kwisiqithi sonke, kwaye amaxesha okuphendula angahluka ngokwamanqanaba ase-US. Abasebenzi bakarhulumente wase-US abavunyelwe ukuya kwiindawo ezidweliswe ngezantsi, ekusebenziseni iibhasi zikawonkewonke, nasekuqhubeni ngaphandle kweendawo ezimiselweyo zaseKingston ebusuku.
I-US ikhuphe izilumkiso ezifanayo ngokuchasene nabanye abamelwane baseCaribbean, kubandakanya neBahamas.